जनता सडकमा उत्रेका बेला कसले निकाल्यो एमसीसीको पक्षमा जुलुस ? को हो नाइके ? — Sanchar Kendra
जनता सडकमा उत्रेका बेला कसले निकाल्यो एमसीसीको पक्षमा जुलुस ? को हो नाइके ?
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)को विरोधमा नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा आज प्रदर्शन भइरहेको छ। एमसीसीको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’नेतृत्वको नेकपा लगायत ५ दलले नेपाल बन्दको आह्वाननै गरेका छन।
एमसीसीको समर्थनमा ‘स्वतन्त्र नागरिक समाज’ले आज मोटरसाइकलर्यालीसहित प्रदर्शन गरेको छ। स्वतन्त्र नागरिक समाज’ नामक अभियानले बुधबार अनामनगरमा मोटरसाइकलसहित समर्थनमा प्रदर्शन गरेको हो।
उनीहरुले एमसीसी राजनीतिसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेका छन्। यता अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्न लागेको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका १३७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर, माइतीघर लगायतको स्थानबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदिप गिरीले ई बताए । पक्राउ परेकाहरुलाई नगर प्रहरी कार्यालय, भृकुटीमण्डसहित विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।
सरकारले संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । प्रदर्शनकारीहरु निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
‘निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडि बढेपछि पक्राउ गरिएको हो’ एसएसपी गिरीले भने, ‘९ जना प्रहरी कर्मचारी घाइते छन्, प्रदर्शनकारीतर्फ एक जना सामान्य घाइते छन् ।’
बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शनका कारण अशान्त रहेको बानेश्वर क्षेत्र साढे ४ घण्टापछि शान्त भएको छ । संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी भएपछि विप्लवसहितका ६ दल र माओवादीका भ्रातृ संगठनले प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो ।